Sunday September 15, 2019 - 10:47:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wakaaladaha wararka reergalbeedka oo soo xiganaya mas'uuliyiin Sacuudiyaan ah ayaa sheegay in duqeymihii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka ay sababeen in kala bar uu joogsado shidaalkii sida maalinlaha ay usoo saari jirtay dowladda Sacuudiga.
Shirkadda ARAMCO oo maamusha ceelasha shidaalka wadanka Sacuudiga ayaa sheegtay in weerarku uu saameyn xun ku reebay wax soo saarka shidaalka ee maalin laha ah balse ay adeegsan doonaan Keydadkii hore ayna sii wadi doonaan dhoofinta shidaalka ee dhanka dibadda.
Dowladda Mareykanka ayaa xukuumadda Shiicada Iiraan ku eedaysay in ay mas'uul ka aheyd weeraradii dhacay maalintii Sabtiga oo ahaa kuwii ugu xumaa ee abid soo mara wadanka Sacuudiga tan iyo markii uu bilaawday duullaanka dowladaha Carabta ee dalka Yemen.
Mike Pompeo oo ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku eedeeyay Iiraan in ay mas'uul ka aheyd weerarkan lagu beegsaday Sacuudiga oo ah saaxiibka koowaad ee Mareykanku ku leeyahay dalalka carabta.
Sirdoonka Mareykanka wuxuu sheegay in uusan hayn caddeymo muujinaya in diyaaradaha weerarka geystay ay ka haadeen dhanka wadanka Yemen, wargeyska New York Times ayaa qoray warbixin uu ku sheegayo in suurtagal ay tahay in diyaaradaha Keydadka shidaalka Sacuudiga weeraray ay ka haadeen Ciraaq ama Iiraan balse xukuumadda Tahran ayaa gaashaanka udaruurtay eedaymaha kaga imaanaya Mareykanka iyo Sacuudiga.